Tekinoroji-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd.
Uri pano: Imba>Technology
Kana isu tichishandisa inorema zvinoyerera kuti Weld Stainless simbi, pane kazhinji inopenya Weld dziva. Patinopedza kuwelda, panosara mwenje inosara yakasimba. Nekudaro, iwe unogona kushandisa "kunonoka" (basa) kuwedzera nguva yeshanduko inoshanduka kudzoreredza mwenje.
Shandisa TIG inverted welder, set 5 ampere solid current, uye iwe unogona kuita ADF kunzwa isina kusimba uye yakagadzikana arc nekusimudza "sensibility", nokudaro uchizadzisa chinangwa chekuchinja mwenje.
Kana uchipisa, kana iwe uine tariro yekuvandudza mashandiro ebasa, unogona kuita iyo inochinja skrini kuti iwanezve kukurumidza nekudzora kunonoka nguva. Nekudaro, iwe unogona kutarisa nzvimbo yekutungidza nekukurumidza uye nekugadzirira iyo inotevera yekunamatira.